OPride.com|Hambaa Habalee Cittee » Mammaaksota Dubartootaa Oromoo
Home » Mammaaksa
Submitted by on January 29, 2011  5:05 pm8 Comments
8 Comments » Abbaa Gannaa says:	February 17, 2011 at 5:35 pm	Abboo mammaaka namatti toluu itti fufi.
Arero Borana says:	April 28, 2011 at 11:42 pm	Abboo guddaa nama gamachisa it fufi
Adam says:	June 14, 2011 at 11:51 am	Mammaaksi kan kee baa`yee namatti tola haaluma kanaan itti fufi baay`ee si galateenfadha
Jamahiikaa says:	May 5, 2012 at 10:55 pm	Hedduu namatti tola. Amma yeroo addunyaan sarara qinlleenssa irraan odeeffannoo waljijjirutti mammaaksa Oromoo haala kanaan funca-toora kanarratti gumaachuun keessan namatti tola. Haaluma kannan itti fufaan jedha.
Hussein abbdi says:	April 27, 2013 at 11:34 pm	Baayee isin galatoonfadha iti nuuf fufaa
Bay'ee bay'ee namattii tola mamaksi keessani galatoma ulfadha. hora+bula+deebaanaa amale galatoma..nufi jiradha akasumani iti nu fufa says:	July 7, 2014 at 11:45 pm	Mamaksi keessan Bay’ee bayee namattii tola nufi jiradha akasuman
iti nu fufa. ulfadha bay’ee galatomaa
shasho says:	November 22, 2014 at 7:08 am	baay’ee gaalatoma adda an him kutina itumaa fufaa lammii koo
nigussie says:	January 22, 2015 at 7:22 pm	baay’ee namati tolaa . jabaadha nu itti fufaa